Tallaallada carruurta: macluumaadka caafimaadka dhalinyarada | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Waa maxay tallaalka carruurta? Caafimaadka Macluumaad ku saabsan carruurta iyo da'yarta aad
Waalidiinta inta badan ka welwelaan ku saabsan daryeelka carruurtooda. Macluumaad Tani waxay kaa caawin doonaan inaad fahamto ku saabsan talaalka.
Carruurta America, carruurta si joogto ah u helaan tallaalada si looga caawiyo inay caafimaad. Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee horumarinta jadwal u gaar ah oo ay raacaan marka carruurta laga tallaalo. Waxaa muhiim ah in carruurta aad u hesho tallaalada ay waqtiga maxaa yeelay waxa ay ka caawisaa iyaga aad caafimaad iyo cudur free.
website-kani kuu sheegayaa oo talaalada loogu talagalay carruurta waxaa ay ku taliyeen dhakhaatiirtu. Waxa kale oo uu kuu sheegayaa oo da 'ah marka dhakhtarradu ka qabaan in ay helaan tallaalka kuwa. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waa in la siiyaa hore ee nolosha ilmaha. Akhri macluumaadka website-ka iyo weydii dhakhtarkaaga haddii aad qabto wax su'aalo ah.
Kids Caafimaadka waa website a macluumaad loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta oo ku saabsan noocyo kala duwan oo mawduucyo la xiriira caafimaadka kids '. Raac xiriirka hoose oo guji "For Parents" wixii macluumaad ah. Waxaad baran kartaa koriinka iyo horumarka ee ilmahaaga, cudurada caruurta caadiga ah, oo u badan, ka badan.
Ethnomed ayaa tiro ka mid ah ilaha la xiriira caafimaadka ilmaha oo lagu turjumay afaf kala duwan. Khaas ahaan, waalidiinta carruurta yaryar rabto laga yaabaa inaad akhrido tilmaame ah Korinta Carruurta Country a New: Handbook Illustrated An. Waa fikrad fiican in waalidnimada ee dalka Mareykanka.
caafimaadka Dhalinyaradu '
Dhallinyaradu waa dad dhallinyaro ah ee da'doodu u dhexeeya 13 iyo 19. Sanadaha dhallinyarnimada waa xilliga muhiim u ah koritaanka iyo horumarka ilmaha. Waxaa jira isbedel jireed muhiim ah kaas oo ka dhici sida carruurta geli qaangaadhnimada. Tani waa xilliga markii wiilasha iyo gabdhaha noqon galmada baaluq. Inta lagu guda jiro qaangaadhnimada, meydadka dhallintaada sii daayo kiimiko loo yaqaan hormoonnada. Waxay keeni kartaa isbedel dareenka iyo sidoo.
Puberty101 waa website a macluumaad ku saabsan waxa ku dhaca jidhka inta lagu guda jiro qaangaadhnimada.
Bodimojo waa website a waxa ku qoran, waayo, dhallinyarada. Waxaad ka akhrisan kartaa oo ku saabsan khayraadka caafimaadka jidhka iyo maskaxda la xiriira taam ahaanshihiisa iyo nafaqada, nolosha bulshada, iyo xiriirada iyo in ka badan.
Kidshealth kale oo uu leeyahay qayb ka mid ah website-kaas oo u heellan in ay arrimaha caafimaadka dhallintaada.
adeegga waa a collection of khayraadka caafimaadka dhallintaada oo ka kala internetka. Riix xiriirka hoose si ay u sahamiyaan macluumaad ku saabsan noocyo kala duwan oo mawduucyo, Caafimaadka Galmada iyo Uurka Teen, Caafimaadka iyo Nafaqada, in isticmaalka daroogada iyo khamriga.